Ahoana ny fomba hampianarana ny alika handeha amin'ny tadiny | Tontolo alika
Raha ny fitsipika dia tsy maintsy mitondra ny alika am-paosy amin'ny toerana imasom-bahoaka isika, ary tsy vitsy ihany koa ny alika voaofana tsara hiara-mandeha amin'ny tompony na hijanona amina toerana tsy mila fanentanana hafa, toy ny alika hafa, saka na baolina iray. Zava-dehibe izany mianatra mandeha amin'ny fehy hatry ny fony mbola kely, satria hampiasan'izy ireo betsaka izany.
Ny tsara indrindra, ny alika rehetra dia afaka mandeha malalaka, fa indrindra amin'ireo tanàn-dehibe ny lalàna dia henjana, ary ny tsy fanaovana izany amin'ny fehikibo dia mety hitarika sazy. Izany no antony tsy maintsy ahalalan'ny alika ny fomba mandeha amin'ny tadiny aloha, mba hifanaraka amin'ireo diany isan'andro. Ny alika kely na alika tsy mahalala hoe inona izany dia mety hanjary ho tototry ny fihetsik'ity fihetseham-po vaovao ity, ka tokony ho fantatrao ny fomba hanokafana azy ireo.
Nahita zanak'alika im-betsaka isika fa amin'ny fotoana voalohany anaovana fehikibo dia mety mihetsiketsika izy ireo na mijanona izy ireo, satria tsy tian'izy ireo ny fahatsapan'ny olona misarika azy ireo, ary tsy fantatr'izy ireo fa mila mandeha eo akaikinay izy ireo. Arakaraka ny atsipatsika, no vao mainka handresy sy hanakana, noho izany mila mandeha tsikelikely isika.
Ny iray amin'ireo tetika tsara indrindra amin'ny mandeha an-tongotra dia ny mitondra zava-mamy miaraka aminay. Raha vantany vao tafahoatra izy ireo dia tsy maintsy atsahatra ny fanerena amin'ny fehy, ary raha tsy manohy ny diany izy ireo, dia esory ny vatomamy hanentanana azy ireo ary hanohy handeha. Ny momba ny fampifangaroana ny tadiny sy ny fivezivezena amin'ny zavatra tsara, hahatonga azy ireo ho traikefa tsara ho azy ireo. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho zatra ny fahatsapana ny vozon'akanjo sy ny tadiny ary efa fantatr'izy ireo fa tsy tokony ho tototry izy ireo, fa izahay irery no mitarika azy amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hampianarana ny alika handeha amin'ny tadiny
Fantaro ny Campus Perruno, any Brunete
Ahoana ny fikarakarana alika amin'ny distemper